Yehowa Nyankopɔn Ye, na ‘Ne Papayɛ Dɔɔso Dɛn Ara!’ | Bɛn Yehowa
‘Ne Papayɛ Dɔɔso Dɛn Ara!’
1, 2. Onyankopɔn papayɛ kɔ akyiri kodu he, na Bible si saa su yi so dua dɛn?
NNIPA bi a wɔyɛ nnamfo fi bere tenten ahyia te abɔnten redidi wɔ awia mu bere a owia rekɔtɔ, na ama wɔn ani agye wɔn ho rekasa serew. Akyirikyiri baabi no, okuafo bi hwɛ n’afuw de abotɔyam serew efisɛ osu amuna na afi ase repete ne nnɔbae a ehia nsu no so. Baabi foforo nso, okunu ne ɔyere bi ani agye sɛ wɔahu sɛ wɔn ba afi ase retutu ne nan a ennyee fam no.
2 Sɛ́ nnipa a wɔte saa nim anaa wonnim no, wɔn nyinaa renya ade biako so mfaso—Yehowa Nyankopɔn papayɛ. Nnipa a wɔpɛ nyamesom taa tĩ asɛm “Onyankopɔn ye” no mu. Bible ka ma emu da hɔ kɛse. Ɛka sɛ: “Ne papayɛ dɔɔso dɛn ara!” (Sakaria 9:17, NW) Nanso, ɛte sɛ nea nnipa kakraa bi pɛ na wonim nea saa nsɛm no kyerɛ ankasa. Dɛn na Yehowa Nyankopɔn papayɛ kyerɛ ankasa, na ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn suban yi fa yɛn mu biara ho?
Onyankopɔn Dɔ Ho Ade a Ɛda Nsow
3, 4. Dɛn ne papayɛ, na dɛn nti na yebetumi aka Yehowa papayɛ ho asɛm wɔ ɔkwan a ɛfata so sɛ ne dɔ a ɔda no adi?
3 Wɔ nnɛyi kasa pii mu no, “papayɛ” yɛ asɛmfua bi kɛkɛ. Nanso, sɛnea wɔdaa no adi wɔ Bible mu no, papayɛ nyɛ asɛnhunu koraa. Ne titiriw no, ɛfa ɔbra pa ne suban pa ho. Ɛnde, ɔkwan bi so no, yebetumi aka sɛ papayɛ ayɛ Yehowa ma. Ne su ahorow nyinaa—a ne tumi, n’atɛntrenee, ne ne nyansa ka ho—yɛ papa nkutoo. Ne nyinaa akyi no, yebetumi aka papayɛ ho asɛm ma afata koraa sɛ Yehowa dɔ a ɔda no adi. Dɛn ntia?
4 Papayɛ yɛ su a wɔda no adi. Ɔsomafo Paulo kyerɛe sɛ ɛyɛ su a nnipa da no adi a ɛyɛ anigye koraa sen trenee. (Romafo 5:7) Yebetumi anya ahotoso sɛ ɔtreneeni bedi mmara mu ahwehwɛde ahorow so pɛpɛɛpɛ, nanso onipa pa yɛ ade kɔ akyiri sen saa. Ofi ne pɛ mu yɛ ade, na ɔyere ne ho hwehwɛ akwan a ɔbɛfa so aboa afoforo. Sɛnea yebehu no, Yehowa ye wɔ saa kwan no so. Ɛda adi sɛ, papayɛ a ɛte saa no fi Yehowa dɔ a enni ano no mu.
5-7. Dɛn nti na Yesu amma wɔamfrɛ no ‘Ɔkyerɛkyerɛfo Pa,’ na nokwasɛm a ɛkɔ akyiri bɛn na wosii so dua wɔ ha?
5 Yehowa da nsow wɔ ne papayɛ mu nso. Bere tiaa bi ansa na Yesu rebewu no, ɔbarima bi kɔɔ ne nkyɛn kobisaa no asɛm, frɛɛ no ‘Ɔkyerɛkyerɛfo Pa.’ Yesu buaa no sɛ: “Adɛn na wofrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye obiako, ɔne Nyankopɔn.” (Marko 10:17, 18) Ebia saa mmuae no bɛyɛ wo nwonwa. Dɛn nti na Yesu teɛɛ ɔbarima no? So na Yesu nyɛ ‘Ɔkyerɛkyerɛfo Pa’ ampa?
6 Ɛda adi sɛ na ɔbarima no de ‘Ɔkyerɛkyerɛfo Pa’ no redi dwuma sɛ adɛfɛdɛfɛsɛm. Yesu fi ahobrɛase mu de anuonyam a ɛte saa no maa ne soro Agya no a ɔyɛ papa sen biara no. (Mmebusɛm 11:2) Na Yesu nso resi nokwasɛm bi a ɛkɔ akyiri so dua. Yehowa nkutoo na ɔyɛ papayɛ ho nhwɛsode. Ɔno nkutoo na ɔwɔ hokwan koraa sɛ ɔkyerɛ nea eye ne nea enye. Adam ne Hawa nam papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no a wofi atuatew mu dii no so hwehwɛe sɛ wɔn ankasa benya saa hokwan no. Esiane sɛ Yesu nte sɛ wɔn nti, ofi ahobrɛase mu gyaw gyinapɛn a wɔbɛhyehyɛ no ma N’agya.
7 Afei nso, na Yesu nim sɛ Yehowa ne nneɛma a eye ankasa nyinaa wura. Ɔne “akyɛde pa nyinaa ne adekyɛde a ɛyɛ pɛ nyinaa” Mafo. (Yakobo 1:17) Ma yɛnhwɛ sɛnea papayɛ da adi wɔ Yehowa ayamye mu.
Yehowa Papayɛ a Ɛdɔɔso no Ho Adanse
8. Ɔkwan bɛn so na Yehowa ada ayamye adi akyerɛ adesamma nyinaa?
8 Obiara a watra ase pɛn no anya Yehowa papayɛ so mfaso. Dwom 145:9 ka sɛ: ‘Yehowa ye ma nnipa nyinaa.’ Ne papayɛ a ɛdɔɔso no ho nhwɛso bi ne dɛn? Bible ka sɛ: “Wannyae ne ho adansedi, yɛ yiye ma mo osu fi soro ne bere a aduan ba, na ɔde aduan ne anigye ma mo abotɔyam.” (Asomafo no Nnwuma 14:17) So woadi aduan bi a ɛyɛ dɛ ma w’ahome aka wo ho pɛn? Sɛ ɛnyɛ Yehowa papayɛ na ɛma ɔnwenee asase yi ne ɛso nsu a edi kyinhyia bere nyinaa ne ‘bere a edi adannan ma aduan ba’ ma yenya aduan pii a, anka aduan biara nni hɔ. Ɛnyɛ nnipa a wɔdɔ Yehowa nkutoo na wayɛ wɔn papa a ɛte saa na mmom obiara. Yesu kae sɛ: “Moayɛ mo agya a ɔwɔ soro no mma; efisɛ ɔma ne wia pue nnipa bɔne ne nnipa pa so, na ɔma osu tɔ gu wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ so.”—Mateo 5:45.
Yehowa “ma mo osu fi soro ne bere a aduan ba”
9. Ɔkwan bɛn so na aprɛ kyerɛkyerɛ Yehowa papayɛ mu?
9 Nnipa pii bu ayamye a ɛsen biara a wɔayɛ adesamma no adewa, esiane sɛ owia kɔ so bɔ, osu kɔ so tɔ, na bere di adannan ma aduan kɔ so ba bere nyinaa nti. Sɛ nhwɛso no, susuw aprɛ ho hwɛ. Ɛyɛ aduaba a abu so wɔ asase so mmeae a ewim nyɛ hyew pii no. Nanso, ɛyɛ fɛ, ne di yɛ dɛ yiye, na nsu a ɛma ahomeka ne ahoɔden wom. So wunim sɛ wɔ wiase nyinaa no, aprɛ ahorow ahorow bɛyɛ 7,500 na ɛwɔ hɔ, a ebi kɔla yɛ kɔkɔɔ, sika kɔkɔɔ, akokɔsrade, ne ahabammono, na ne kɛse reyɛ ayɛ sɛ akutu? Sɛ aprɛ aba ketewaa bi da wo nsam a, ɛnsɛ hwee. Nanso, efifi nyin yɛ nnua a ɛma ahomeka sen biara no mu biako. (Nnwom mu Dwom 2:3) Aprɛ gu nhwiren a ɛyɛ fɛ wɔ fefɛw bere biara mu; ɛsow aba otwabere biara. Afe biara—kosi mfirihyia 75—aprɛ dua tumi sow aba bɛyɛ nnaka 20 a emu biara mu duru yɛ kilogram 19!
Aba ketewaa yi nyin bɛyɛ dua a etumi ma nnipa aduan mfirihyia pii
10, 11. Ɔkwan bɛn so na nkate ahorow da Onyankopɔn papayɛ adi?
10 Yehowa fi ne papayɛ a enni ano mu ama yɛn nipadua a ‘ɛyɛ nwonwa,’ ne nkate a ɔyɛe na aboa yɛn ma yɛahu ne nnwuma na yɛanya mu anigye. (Dwom 139:14) Susuw tebea horow a yɛkaa ho asɛm wɔ ti yi mfiase no ho hwɛ. Ahwɛde bɛn na ɛma mmere a ɛtete saa yɛ anigye? Abofra a ɔreserew afono a ayɛ hyɛnn. Nsu a ɛretɔ gu afuw so. Awiatɔ kɔla kɔkɔɔ, sika kɔkɔɔ, ne afasebiri no. Wɔayɛ nnipa aniwa na ama atumi ahu kɔla ahorow bɛboro 300,000! Na yetumi te ɛnne a ɛyɛ dɛ ahorow, mframa a ɛrebɔ fa nnua mu, akokoaa nserehehe. Dɛn nti na yetumi hu tebea ne nnyigyei ahorow a ɛtete saa no? Bible ka sɛ: “Asõ a ɛte ne aniwa a ehu, [Yehowa, NW] na ɔyɛɛ n’abien nyinaa.” (Mmebusɛm 20:12) Nanso, eyinom yɛ nkate ahorow no mu abien pɛ.
11 Yehowa papayɛ ho adanse foforo ne ade hua. Nnipa hwene tumi te hua ahorow bɛyɛ 10,000. Wo de susuw kakraa bi ho hwɛ: aduan a w’ani gye ho a wɔrenoa, nhwiren ahorow, nhaban a ɛretete gu, ogya a wɔto wusiw pampan. Na sɛnea biribi ka wo a wote nka no ma wote mframa a ɛbɔ fa w’anim fããfãã no, atuu a ɔdɔfo bi yɛ wo ma wo awerɛkyekye, aduaba bi a ekura wo nsam ho tromtrom a ɛyɛ. Sɛ wokaw mu a, wote ne dɛ. Wote ne huam bere a wo tɛkrɛma te aduaba no mu nsu no dɛ no. Yiw, yɛwɔ nea yebegyina so koraa aka Yehowa ho asɛm sɛ: “Wo papa a wode asie ama wo fɛrefo no sõ dɛn ara!” (Dwom 31:19) Nanso, ɔkwan bɛn so na Yehowa de papa “asie” ama wɔn a wosuro Onyankopɔn no?
Papayɛ a Mfaso Wɔ So Afebɔɔ
12. Nsiesiei ahorow a Yehowa yɛ bɛn na ɛho hia sen biara, na dɛn ntia?
12 Yesu kae sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ: ɛnyɛ abodoo nko so na onipa nam bɛtra ase, na asɛm biara a efi Onyankopɔn anom so.” (Mateo 4:4) Nokwarem no, Yehowa honhom fam nsiesiei no betumi ama yɛanya nneɛma pa pii asen nea honam fam nneɛma biara betumi ama yɛanya, efisɛ ɛde yɛn kɔ daa nkwa mu. Yehui wɔ nhoma yi Ti 8 sɛ Yehowa de ne tumi a ɔde siesie ade no adi dwuma wɔ nna a edi akyiri yi mu de honhom fam paradise asi hɔ. Ade titiriw a ɛwɔ saa paradise no mu ne honhom fam aduan a abu so.
13, 14. (a) Dɛn na odiyifo Hesekiel hui wɔ anisoadehu mu, na ɛkyerɛ dɛn ma yɛn nnɛ? (b) Honhom fam nsiesiei a ɛma nkwa bɛn na Yehowa yɛ ma n’asomfo anokwafo?
13 Wɔ Bible mu nkɔmhyɛ ahorow a ɛfa nsiesie ho biako mu no, wɔmaa odiyifo Hesekiel nyaa asɔrefie a wɔasiesie na ɛwɔ n’anuonyam mu ho anisoadehu. Asuten bi fii saa asɔrefie no mu sianee, na bere a ɛretene kɔ no, emu trɛwee na emu dɔe araa kosii sɛ ɛbɛyɛɛ “asu a ɛboro so.” Baabiara a saa asu no kɔe no, ɛyɛɛ nhyira. Nnua a efifii n’asukɔn so no ma wonyaa nnuan, na wɔde bi saa yare. Na asu no de nkwa mpo baa Po a Awu a ɛyɛ nkyenenkyene no mu, na nkurɔfo nyaa adwuma yɛe! (Hesekiel 47:1-12) Nanso, na eyi nyinaa kyerɛ dɛn?
14 Anisoadehu yi kyerɛe sɛ Yehowa bɛsan de ne som kronn ho nhyehyɛe no asi hɔ bio, sɛnea asɔrefie a Hesekiel hui no yɛɛ ho mfonini no. Te sɛ anisoadehu mu asuten no, Onyankopɔn nsiesiei a ɛma nkwa no bɛsen afa ne nkurɔfo mu na ayɛ kɛse bere nyinaa. Efi bere a wɔde ɔsom kronn san sii hɔ wɔ afe 1919 mu no, Yehowa ama ne nkurɔfo anya akyɛde a ɛbɛma wɔanya daa nkwa. Ɔkwan bɛn so? Wiɛ, Bible ahorow, Bible ho nhoma, ne nhyiam ahorow nyinaa aboa ma nnipa ɔpepem pii anya nokwasɛm a ɛho hia. Yehowa nam akwan a ɛtete saa so akyerɛkyerɛ nkurɔfo ne nsiesiei a wɔnam so nya nkwa no mu nea ɛho hia sen biara no ho ade—Kristo agyede afɔre a ɛma obi nya gyinabea a ɛho tew wɔ Yehowa anim no, na wama wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn nokwarem na wosuro no no nyinaa anya daa nkwa ho anidaso. * Enti, wɔ nna a edi akyiri yi mu nyinaa no, bere a honhom fam kɔm de wiase no, Yehowa nkurɔfo adidi anom honhom fam.—Yesaia 65:13.
15. Ɔkwan bɛn so na adesamma anokwafo benya Yehowa papayɛ wɔ Kristo Mfirihyia Apem Nniso no mu?
15 Nanso, Hesekiel anisoadehu mu asuten no nnyae sen bere a nneɛma nhyehyɛe dedaw yi ba n’awiei no. Mmom no, ɛbɛkɔ so asen pii wɔ Kristo Mfirihyia Apem Nniso no mu. Saa bere no, Yehowa nam Mesia Ahenni no so de bo a Yesu afɔrebɔ no som no nyinaa bedi adesamma anokwafo ho dwuma nkakrankakra de wɔn akɔ pɛyɛ mu. Hwɛ sɛnea yebedi ahurusi wɔ Yehowa papayɛ ho!
Yehowa Papayɛ Afã Foforo
16. Ɔkwan bɛn so na Bible da no adi sɛ Yehowa papayɛ fa su afoforo ho, na eyinom bi ne nea ɛwɔ he?
16 Yehowa papayɛ nyɛ ayamye ara kwa. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mɛma me papa nyinaa asen w’anim; na mɛpae [Yehowa, NW] din wɔ w’anim.” Akyiri yi, kyerɛwtohɔ no ka sɛ: “[Yehowa, NW] betwaam n’anim, na ɔpaee sɛ: [Yehowa, Yehowa, Yehowa, NW], Onyankopɔn mmɔborohunufo ne ɔdomfoɔ, nea n’abodwo kyɛ na n’adɔeyɛ ne ne nokware dɔɔso pii.” (Exodus 33:19; 34:6) Enti, Yehowa papayɛ fa su pa pii ho. Ma yensusuw emu abien pɛ ho.
17. Dɛn ne ɔdom, na ɔkwan bɛn so na Yehowa ada no adi akyerɛ nnipa a wɔnyɛ pɛ?
17 “Ɔdomfoɔ.” Saa su yi ka sɛnea Yehowa ne n’abɔde di ho nsɛm pii kyerɛ yɛn. Sɛ́ anka Yehowa bɛyɛ obi a ɔka nsɛm penpen yayaayaw, ɔmpɛ nnipa, anaasɛ ɔyɛ nhyɛ, sɛnea nnipa a wɔwɔ tumi taa yɛ no, odwo na ne yam ye. Sɛ nhwɛso no, Yehowa ka kyerɛɛ Abram sɛ: “[Mesrɛ wo, NW], ma w’ani so, na fi nea wowɔ hɔ hwɛ benkum fam ne nifa fam ne apuei ne atɔe.” (Genesis 13:14) Nkyerɛase pii yi asɛm “mesrɛ wo” no fi mu. Bible ho abenfo ka sɛ na agyiraehyɛde bi wɔ Hebri mfitiase nkyerɛwee no mu a ɛmma asɛm no nyɛ ɔhyɛ mu a wofi bisa biribi na mmom nidi mu a wofi srɛ biribi. Nhwɛso a ɛtete saa foforo wɔ hɔ. (Genesis 31:12; Hesekiel 8:5) Susuw ho hwɛ, amansan Hene no ka sɛ “mesrɛ wo” kyerɛ onipa! Wɔ wiase a atirimɔdensɛm, anuɔdensɛm, ne aniammɔnhosɛm ayɛ mu ma no, so ɛnyɛ nea abotɔyam wom sɛ wubesusuw yɛn Nyankopɔn, Yehowa, dom ho?
18. Ɔkwan bɛn so na Yehowa “nokware dɔɔso pii,” na dɛn nti na saa nsɛm no ma awerɛhyem?
18 “Ne nokware dɔɔso pii.” Atorodi abɛyɛ wiase no su nnɛ. Nanso, Bible kae yɛn sɛ: “Onyankopɔn nyɛ onipa, na wadi atoro.” (Numeri 23:19) Nokwarem no, Tito 1:2 ka sɛ ‘Onyankopɔn ntumi nni atoro.’ Oye dodo sɛ ɔbɛyɛ saa. Enti, Yehowa bɔhyɛ ahorow yɛ nea yebetumi de yɛn ho ato so koraa; ne nsɛm bam bere nyinaa. Wɔfrɛ Yehowa “nokware Nyankopɔn” mpo. (Dwom 31:5) Ɛnyɛ atoro nko na onni na mmom ɔka nokware pii. Ɔnyɛ obi a ɔde nneɛma sie fee, na ɔkatakata nneɛma so, anaasɛ ɔnka n’asɛm; mmom no, ofi ayamye mu nam ne nyansa a enni ano no so ma n’asomfo anokwafo nya hann. * Ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛnea wɔde nokware ahorow a ɔka kyerɛ wɔn no bɛbɔ wɔn bra, sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi ‘akɔ so anantew nokware no mu.’ (3 Yohane 3) Ne nyinaa mu no, ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ Yehowa papayɛ ka yɛn sɛ ankorankoro?
‘Ma W’ani Nka Yehowa Nnepa Ho’
19, 20. (a) Ɔkwan bɛn na Satan faa so sɛee Yehowa papayɛ mu ahotoso a na Hawa wɔ no, na dɛn na efii mu bae? (b) Nkɛntɛnso bɛn na ɛfata sɛ Yehowa papayɛ nya wɔ yɛn so, na dɛn ntia?
19 Bere a Satan sɔɔ Hawa hwɛe wɔ Eden turom no, ofii ase denam ahotoso a na Hawa wɔ wɔ Yehowa papayɛ mu a ɔsɛee no so. Na Yehowa aka akyerɛ Adam sɛ: “Turom ha nnua nyinaa, di bi.” Nnua mpempem pii a ɛbɛyɛ sɛ na ɛwɔ turom hɔ no, emu biako pɛ na Yehowa kae sɛ wɔmmfa wɔn nsa nnka. Nanso, hwɛ sɛnea Satan bisaa Hawa asɛm a edi kan no: “Ampa na Onyankopɔn aka sɛ: Munnni turom ha nnua nyinaa bi?” (Genesis 2:9, 16; 3:1) Satan kyinkyim Yehowa nsɛm maa Hawa nyaa adwene sɛ na Yehowa de biribi pa bi resie no. Awerɛhosɛm ne sɛ, ɔkwan a ɔfaa so no ma onyaa nea na ɔhwehwɛ no. Hawa, te sɛ mmarima ne mmea pii a wɔbaa n’akyi no, adwenem fii ase yɛɛ no nãã wɔ Onyankopɔn a na wama no biribiara a ɔwɔ no papayɛ ho.
20 Yenim awerɛhow ne ahohia kɛse a adwenem nããyɛ a ɛte saa de aba no. Enti momma yentie asɛm a ɛwɔ Yeremia 31:12 no: ‘Wɔn ani bɛka Yehowa nnepa ho.’ Nokwarem no, ɛsɛ sɛ Yehowa papayɛ ma yɛn ani ka ne nnepa ho. Ɛnsɛ sɛ yɛn adwenem yɛ yɛn nãã wɔ yɛn Nyankopɔn a ne papayɛ dɔɔso pii no atirimpɔw ho da. Yebetumi de yɛn ho ato no so koraa, efisɛ adepa nkutoo na ɔpɛ sɛ wɔn a wɔdɔ no no nya.
21, 22. (a) Akwan a wobɛpɛ sɛ wofa so yɛ Yehowa papayɛ ho biribi no bi ne dɛn? (b) Su bɛn na yebesusuw ho wɔ ti a edi hɔ no mu, na ɔkwan bɛn so na ɛyɛ soronko wɔ papayɛ ho?
21 Afei nso, sɛ yenya hokwan sɛ yɛbɛka Onyankopɔn papayɛ ho asɛm akyerɛ afoforo a, yɛn ani gye. Dwom 145:7 ka fa Yehowa nkurɔfo ho sɛ: “Wɔworo wo papayɛ bebrebe no nkae.” Da biara da a yɛte nkwa mu no, yenya Yehowa papayɛ so mfaso ɔkwan bi so. Dɛn nti na womfa nyɛ wo su sɛ wobɛda Yehowa ase wɔ ne papayɛ pɔtee bi ho da biara da? Saa su no a yebesusuw ho, ada Yehowa ase daa wɔ ho, na yɛaka ho asɛm akyerɛ afoforo no bɛboa yɛn ma yɛasuasua yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ papa no. Na bere a yɛhwehwɛ akwan a yɛbɛfa so ayɛ papa, sɛnea Yehowa yɛ no, yɛbɛbɛn no pii. Ɔsomafo Yohane a na ne mfe akɔ anim no kyerɛwee sɛ: “Ɔdɔfo, nhwɛ bɔne nsua, na mmom hwɛ papa sua. Nea ɔyɛ papa no fi Nyankopɔn.”—3 Yohane 11.
22 Yehowa papayɛ bata su afoforo ho nso. Sɛ nhwɛso no, Onyankopɔn yɛ “ɔdomfoɔ,” anaa ɔwɔ nokware dɔ. (Exodus 34:6) Yehowa de saa su yi nkutoo di dwuma mpɛn pii sen papayɛ, efisɛ ɔda no adi kyerɛ n’asomfo titiriw. Yebehu ɔkwan a ɔfa so yɛ saa wɔ ti a edi hɔ no mu.
^ nky. 14 Yehowa papayɛ ho nhwɛso biara nni hɔ a ɛbɛsen agyede no. Yehowa paw ne Dɔba a ɔwoo no koro no fii honhom abɔde ɔpepem pii no nyinaa mu sɛ ommewu mma yɛn.
^ nky. 18 Ntease wom sɛ Bible de nokware bata hann ho. Odwontofo no too dwom sɛ: “Ma wo hann ne wo nokware mmegya me.” (Dwom 43:3) Yehowa ma wɔn a wɔpɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn no hu ne hann, anaasɛ wonya ne ho nimdeɛ pii.—2 Korintofo 4:6; 1 Yohane 1:5.
1 Ahene 8:54-61, 66 Ɔkwan bɛn so na Salomo kyerɛɛ Yehowa papayɛ ho anisɔ, na enyaa Israelfo no so nkɛntɛnso dɛn?
Dwom 119:66, 68 Ɔkwan bɛn so na yɛn mpaebɔ betumi ada ɔpɛ a yɛwɔ sɛ yesuasua Yehowa papayɛ no adi?
Luka 6:32-38 Dɛn na ebetumi akanyan yɛn ma yɛasuasua Yehowa ayamye no bi?
Romafo 12:2, 9, 17-21 Ɔkwan bɛn so na yebetumi ayɛ papa wɔ yɛn da biara da asetra mu?
Da biara da, Onyankopɔn yɛ nnipa nyinaa papa; ne papayɛ dɔɔso araa ma bonniayɛfo mpo ɔma bi sõ wɔn so.